Cash-Strapped Zimbabwe Issues Contradictory Statements on Civil Servants' Bonuses
The crisis ridden Zimbabwe government is again issuing conflicting statements on the payment of overdue bonuses owed to civil servants. The bonuses are routinely paid in November and December
The statement directed to secretary for Health and Child Care, Brigadier General Gerald Gwinji, read: “As you might be aware bonus payment for Health Workers had been scheduled for today, (Thursday) 31st March 2016. Please advise all institutions that there has been a delay in the honoring of this commitment and we await details from treasury.”
Later, Finance Minister Patrick Chinamasa issued a somewhat contradictory statement saying, “As previously communicated, government is paying the 2015 bonus payments on a staggered basis, with the first installment having been made end of February 2016. The next proposed payment date is for end March 2016. In this regard, 2015 bonus payments for members of the Zimbabwe Republic Police are being made tomorrow (Friday), 1 April 2016.”
Chinamasa’s statement further said, “To allow for mobilization of additional resources, 2015 bonus payments to members of the Zimbabwe Prisons and Correctional Services and staff under the Health sector will be made on Thursday 7th April 2016. The 2015 bonus payment dates for the Education Sector and the rest of the civil service remain as previously communicated, that is, 30th April, 2016 and 31st May, 2016 respectively.”
Chinamasa in February said members of the defense forces - who include the Zimbabwe National Army and the Air Force of Zimbabwe - were to be paid that month, followed by the Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Prisons and Correctional Services and the health sector in March.
The move irked civil servants and President Robert Mugabe overturned the suspension saying “when government bestows a benefit on civil servants, that benefit cannot be withdrawn because it has become a right.”